अबको सात वर्ष यी राशिमा रहँदैन शनिको महादशा, जीवन नै कायापलट हुने सफलता मिल्नेछ ! – Sandesh Press
August 1, 2021 488
सबै ग्रहहरु मध्ये शनि ग्रह सबैभन्दा ढिलो चाल चल्ने ग्रह हो, जसको कारण कुनै पनि राशिमा यसको प्रम्भाव निकै लामो समयसम्म रहन्छ। शनिलाई एक राशिबाट अर्कोमा आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्न साढे दुई वर्ष लाग्छ।
जब शनि एक राशिबाट अर्को राशिमा प्रवेश गर्छ तब कुनै राशिमा साढे सातीको दशा सुरु हुन्छ भने कुनै राशिमा समाप्त हुने गर्छ। ज्योतिष शास्त्रमा शनिलाई न्यायको देवता मानिन्छ। यसले व्यक्तिको कर्मको आधारमा शुभ-अशुभ फल दिने गर्छ।
२०२२ देखि २०२८ सम्म यी राशिमा रहने छैन शनिको साढे साती
सन् २०२८ अर्थात् अबको सात वर्षसम्म मिथुन, कर्कट सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक र धनु राशिका मानिसहरुमा शनिको साढे साती रहने छैन। शनि यस समयमा मकर राशिमा विराजमान छ। जसको कारण शनिको साढे साती धनु, मकर र कुम्भ राशिका मानिसमा चलिरहेको छ।
मिथुन र तुला राशिमा शनिको ढैय्या(छायाँ)को प्रभाव छ। कुनै पनि राशिमा शनिको साढे साती तीन चरणमा चल्छ। हाल धनु राशिमा यसको अन्तिम चरण चलिरहेको छ।
Prev‘गजेडी’लाई कारवाही गर्न खोज्ने प्रहरीलाई फुलमाला लगाएर धन्यवाद दिनुपर्छ-आङकाजि शेर्पा
Next‘अदुवा’ औषधिय गुणले भरिपुर्ण जडिबुटी यस्तो छ, अदुवा सेवन गर्नुका सात अचुक फाईदाहरु !
विदेशबाट फर्किदा सोझालाई यसरी फसाउँदा रहेछन्, एयरपोर्टमा पक्राउपछि खुल्यो रहस्य